Safari 10 dia misy amin'ny OS X El Capitan sy OS X Yosemite | Avy amin'ny mac aho
Ity dia tolakandron'ny fanavaozana ary amin'ny fomba hafa, ny browser browser an'ny OS X El Capitan sy OS X Yosemite dia nahazo ny kinova vaovaony ihany koa. Ity fanavaozana ity dia misy fanatsarana vitsivitsy amin'ny fahombiazan'ny mpitety tranonkala ankoatry ny fanaovana azy cMifanaraka amin'ireo fanitarana sasany izay azo atao mivantana avy amin'ny Mac App Store. Ny kinova vaovao dia miaraka amina andian-dahatsoratra vaovao izay mamela ny navigateur miaraka amina fanarenana fiarovana marobe sy fiasa vaovao izay haseho eto ambany.
Ny zavatra voalohany misongadina indrindra amin'ity fanavaozana Safari vaovao ity dia ny fanatsarana ny fiainana manokana, ny filaminana ary ny fifanarahana. Avy eo isika dia mahita fanatsarana mahaliana sasany amin'ny fomba fanamafisana ny fiarovana rehefa mihazakazaka modules amin'ny tranonkala nahazo alalana izahay. Manampy koa fanatsarana ny entana atiny manao azy io haingana kokoa ary manatsara ny fizakantenan'ny Mac antsika. Fanatsarana iray hafa amin'ity kinova vaovao ity ny nohamafisina ny endri-pamenoana fiara ary omena fanampiana ny famenoana ho azy ny mombamomba anao avy amin'ny fampiharana Contacts. Nihatsara koa ny endrika fijerin'ny mpamaky ary ankehitriny ny mpitety tranonkala ihany hamonjy ny tahan'ny zoom izay hotanterahinay amin'ny tranokala tsirairay tsidihinay.
Aza adino fa ilaina ny mamerina ny masinina hahafahana mametraka ity kinova vaovao ity izay ho hitantsika rehefa miditra amin'ny Mac App Store ao amin'ny takelaka fanavaozana ary rehefa vita ny fizotry ny fisintomana sy ny fanavaozana ilaina ny famerenana miverina. Ho an'ny ambiny raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ity fanavaozana ity isika dia afaka mandeha mivantana amin'ny Tranonkala mpanohana an'i Apple
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X El Capitan » Safari 10 dia misy amin'ny OS X El Capitan sy OS X Yosemite izao
Misaotra noho ny vaovao, tena nahasoa ahy io. Vao avy nanavao ny kinova Safari 10 aho ary mamerina ny Mac tsy miasa intsony ho ahy. Tsy afaka manokatra aho. Fantatrao ve raha misy ny olana?
Eny, tsy tokony hanana olana isan-karazany ianao. Andramo avereno indray ny Mac anao raha tsy mety aminao izany.